ICasaVacanzeGiacomoLeopardi yenziwe ngekhitshi eliphangaleleyo elinebhedi yesofa, igumbi lokulala eliphindwe kabini elinebalcony, igumbi lokulala elinye elineebhedi ezilala phantsi, igumbi lokuhlambela elineshawa.ulterior terrace ukuya 'ekungeneni ngebarbecue, itafile ukuze ikwazi ukuhlala yonke' aperto.Igaraji eyodwa eneempahla ezikufutshane. I-pool ivuliwe imihla ngemihla ukusuka kwi-8.00 ukuya kwi-23.00, ukungena emanzini kuyafuneka ukusebenzisa i-cap.
Iindwendwe zinokusebenzisa izithuba zendlu kunye nephuli (i-headphones ezinyanzelekileyo), ngokuhlonipha iiyure zokuthula ukusuka kwi-23 ukuya kwi-8 kwaye ukusuka kwi-13 ukuya kwi-15. iindawo zokupaka ezingezantsi zibucala.
ICasa Vacanze Giacomo Leopardi ikwindawo yokuhlala enesango elinye, itrafikhi encinci kunye nokuzola. Ifumaneka kwindawo esezantsi yeCavaion ihlala kwindawo ephuma umoya, umgama omfutshane ukusuka kwiziko kunye nazo zonke izinto eziphambili, ezifikelelekayo ngeenyawo kwindawo yabahambi ngeenyawo kwindawo ephezulu yesithili. Ukusuka echibini unokubona icawa yaseCavaion Alto kunye nenxalenye ye-Moscal ephakanyisiweyo (isiseko sangaphambili se-NATO bunker) ukusuka apho unokuyonwabela imbono entle yechibi. Ukusuka apha qalisa abathandi bokuhamba kunye namavili amabini iindlela ezingapheliyo endleleni, umjikelo kunye nokungcola. Ezininzi ezahlukeneyo
amathuba ahlukeneyo okuhlaziya phakathi kwemivalo, iivenkile zokutyela, ukungcamla iwayini kwiindawo zokuthengisa iwayini kunye neoyile.